Apple inosimbisa iyo: iyo iPhone 7 ichaunzwa munaGunyana 7 | IPhone nhau
Apple inozvisimbisa: iyo iPhone 7 ichaunzwa munaGunyana 7
Izvo zvakatosimbiswa, kufungidzira uye runyerekupe zvapera: Apple ichaunza yayo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus munaGunyana 7. Izvi zvakangoziviswa kune vezvenhau, uye kuverenga kwakatanga. Iyo nguva yasvika yekuziva izvo Apple zvaakatigadzirira isu kune ino yekupera kwegore. Ko dema dema richasimbiswa? Pachave nemuenzaniso wekuwedzera ane mbiri kamera kana isu tichavawo nePro modhi sezvakataurwa nezvayo? Chii chaizvo chichaitika kune yemusoro jack chinobatanidza? Aya nemamwe makuhwa achasimbiswa kana kurambwa musi iwoyo.
Ruvara rwebhuruu "Rwebhuruu" nyowani kana dema dema dema rakasviba kupfuura iro grey razvino rinogona kuwedzerwa kuwanda kwemavara anowanikwa kune iyo iPhone, nekudaro zvichibatsira kukanganwa zvishoma kuora mwoyo kwekutanga neyakaenderera dhizaini inozogara zvakadaro kudarika makore maviri echinyakare. Pamusoro pezvo, pane zvakare mubvunzo wekuti bhatani rekutanga richaramba riri remuchina sepakutanga here kana kuti richava neTrackpad mashandiro, nemasaini ekumanikidza ayo anotendera zviito zvakasiyana kuti zviitwe zvichienderana nesimba ratinochimanikidza. Iyo headphone jack yekubatanidza ikozvino yaonekwa seasipo, asi isu hatizive kuti ndeapi mahedhifoni ayo Apple achasanganisira, kana kana ichizongo gadzirisa dambudziko neadapter. Iyo yakavandudzwa kamera yeiyo iPhone 7 uye mbiri kamera yeiyo 7 Plus, iyo inogona zvakare kuve ne Smart Connector, kunyangwe isu tisingazive chaizvo kuti nei. Zvakawanda zvakagadzirwa zveiPhones nyowani uye ino ndiyo nguva yekuteerera nekuona.
Kana chiitiko ichi chikaitika munaGunyana 7, maererano nekufungidzira kwevakawanda, Iyo iPhone inogona kuenda kutengeswa musi wa16 wemwedzi mumwe chetewo, kutanga kuchengetedza kuburikidza newebhu munaGunyana 9, vhiki imwe chete zvisati zvaitika. iOS 10 GM inogona kuburitswa munaGunyana 7, neshanduro yekupedzisira inowanikwa kune vese vashandisi pasvondo rapfuura, pa 14. Asi iyo yekupedzisira ichiri runyerekupe, saka tichafanirwa kumirira Keynote kuti tione kuti zvirongwa zvacho ndezvipi. Manzana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Apple inozvisimbisa: iyo iPhone 7 ichaunzwa munaGunyana 7
Zvakanaka! Kumirira netariro huru. Ini ndoda Apple kushamisika panguva ino.
Zvinonyatsoonekwa. Avo kunze kwekutarisa denderedzwa vakaumba iyo yekumusoro apuro logo inomiririra meklra mukamera yangu kunyanya mukuvhura kwayo kukuru, asi iwo mufananidzo unoratidza zvakawanda, uchiona mavara, iwo akafanana, (uye ndinofunga hapana kushayikwa kwetoni ipi neipi) pane izvo zvinoonekwa muSiri, ita bvunzo, taura siri siri, iwe uchaona kuti mafungu emavara e siri anoenderana nemavara emufananidzo.
rangarira kuti neIOS 10 sirise inovhura kune vechitatu mapato, mune iyo betas haina kuyedzwa nekuti inyaya yevanogadzira yekuvandudza. Zviri pachena kuti ivo vanogadzira makuru maapplication vane gomba mune ino yakakosha, ndinogona kufungidzira hafu kiyi izere izere nemirairo yeSiri kubva kune wechitatu-bato maapplication, ndiko kuti, hei Siri bhuku kamuri muhotera yakachipa kwazvo muBarcelona uye tsvaga mota kunzvimbo imwecheteyo. Unogona kufungidzira mhedzisiro yacho?
Ndinoziva kuti chimwe chinhu chikuru chichauya kubva kuApple pane iyo nyowani IPhone ini ndanga ndiine ese matavi epa iPhone uye nditende ini handina chichemo nezve izvi zvishandiso. Uye chimwe chinhu ini ndinogara ndichiedza kutengesa iyo yapfuura iPhone kuti ndingoite mutsauko uye ndiwane uye uwane zvakawanda kubva mune idzi Smartphone  
Mimhanzi yeIOS yakavandudza zvinoshamisa mukati memavhiki ekutanga kwayo